वामदेवले किन सार्वजनिक गरे नेकपाको त्यो गोप्य प्रतिवेदन? - राजनीति - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
वामदेवले किन सार्वजनिक गरे नेकपाको त्यो गोप्य प्रतिवेदन?
नेपालखबर काठमाडौँ पुस १
केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेका नेकपाका बरिष्ठ नेता वामदेव गौतम र प्रधानमन्त्री ओलीबीच गजवको सवालजवाफ सुरु भएको छ।
यसैक्रममा गौतमको सचिवालयले एमाले-माओवादी केन्द्रअघि तत्कालिन वामगठबन्धनले निर्माण गरेको एउटा उच्चस्तरीय कार्यदलको गोप्य प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिएको छ।
आइतबार गौतमको सचिवालयले गौतम नेतृत्वमा गठित गरेको ‘सरकारका सुशासन र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिएको हो।
सो कार्यदल पार्टी एकता तत्कालिन एमाले-माओवादी केन्द्रको एकता संयोजन समितिले ७ माघमा गठन गरेको थियो। र, ६ फागुनमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।
कार्यदललाई सरकार गठन भएपछि गर्नुपर्ने अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजना कसरी, कति समयमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
गौतम नेतृत्वको सो उच्चस्तरीय कार्यदलमा तत्कालिन एमालेबाट उपाध्यक्ष भीम रावल, पोलिटब्यूरो सदस्य विजय पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष युवराज खतिवडा (हाल अर्थमन्त्री) थिए।
तत्कालिन माओवादी केन्द्रबाट केन्द्रीय सचिवालय सदस्य गिरिराजमणि पोखरेल र वर्षमान पुन र पार्टी केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्यसमेत रहेका योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ थिए।
सो कार्यदलले एक महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारी ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको चौँथो दिन ६ फागुनमा दुबै अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।
पार्टीको चुनावी घोषणा पत्र, समृद्धिका योजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कर्मचारीको सरुवा–बढुवा, विभिन्न महत्वपूर्ण नियुक्ति कसरी गर्ने, बजेट कसरी व्यवस्था गर्ने लगायतका व्यवस्था समेत गौतम कार्यदलले सिफारिस गरेको थियो।
राजनीतिक नियुक्ति, कर्मचारीको सरुवा–बढुवा जस्तो सम्वदेनशील विषयहरु समेत भएकाले नेकपाले अहिलेसम्म सो प्रतिवेदन गोप्य राख्दै आएको छ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीसँग गौतमको दुरी बढ्दै जाँदा गौतम पछिल्लो पटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुँदाका प्रेस संयोजक विश्वमणि सुवेदीले इमेलमार्फत् सार्वजनिक गरिदिएका छन्।
बुझ्न गार्‍हो छैन, गौतमको निर्देशनमा नै उनका प्रेस संयोजक सुवेदीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् र यो ओलीसँगको गौतमको पछिल्लो द्वन्द्वको परिणाम हो।
किनभने, सो प्रतिवेदनमा उल्लेखित कतिपय कार्यक्रम र योजनाहरु कुनै सरकार बनेको एक महिना र कुनै ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने थिए, तर अहिलेसम्म सम्पन्न भएका छैनन्।
जस्तो, एउटा उदाहरण– गौतम कार्यदलले ‘सम्पूर्ण गरिब घरपरिवारलाई छ महिनाभित्र राज्य सुरक्षा परिचयपत्र वितरण गर्ने’ सिफारिस गरेको थियो, जो अहिलेसम्म पुरा भएको छैन।
समयावधि नै तोकेर गौतम कार्यदलले सरकारले पुरा गनुपर्ने केही नीति र योजनाको सिफारिस गरेको थियो, तीपनि ओली सरकारले पुरा गर्न सकेको छैन।
ओलीसँगका कतिपय भद्र सहमति, ओलीले दिएका कतिपय आश्वासन र वचन पुरा नभएका कारण गौतम पछिल्लो समय ओलीसँग असन्तुष्ट छन्। र, ओलीसँगको उनको सम्बन्ध टाढिँदो छ।
फलस्वरुप शनिबार (२९ मंसिर) को केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी समितिको बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले पेश गरेको प्रतिवेदन विरुद्ध अर्काे प्रतिवेदन पेश गरेका छन्।
उनले त्यसलाई आफ्नो ‘विचार’ र अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमाथि ‘पुरक प्रस्ताव’ भनेपनि सरकार र ओलीको कार्यशैलीको निकै तीखो आलोचना गरेका छन्।
सरकार र ओलीको आलोचनामात्र होइन, प्रम ओलीले पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी भूमिका सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न नसकेको दावी गर्दै प्रचण्डलाई एकल अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
आइतबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा आफू र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच फाटो ल्याउन खोजिएको आरोप लगाएका थिए, जुन गौतमप्रति लक्ष्यित थियो।
आफू र प्रचण्डबीच फाटो पार्न खोजिएको आरोप ओलीले लगाएको केही समय बित्दानबित्दै गौतमको सचिवालयको तर्फबाट सो गोप्य प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो।
‘गौतम कार्यदलले बुझाएको सुझाव–प्रतिवेदन पार्टीद्वारा स्वीकार गरिएको र कार्यान्वयनको प्रतिवद्दा पनि व्यक्त गरिएको थियो’ सञ्चारकर्मीहरुलाई पठाइएको इमेलमा सुवेदीले गौतमको पूरक (फरक) प्रतिवेदनमा उल्लेखित कतिपय विषय पुष्टि गर्नका लागि प्रतिवेदन सम्प्रेषण गरिएको बताएका छन्।
नेकपाले अहिलेसम्म सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छैन। तर, आफूले ‘फरक विचारका रुपमा उठाएका विषय पुष्टि गर्न’ भन्दै गोप्य प्रतिवेदन गरेर गौतमले सन्देश दिन खोजेका छन्, पार्टीले तयार पारेको मार्ग निर्देशन अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र उनी नेतृत्वको सरकार अघि बढिरहेको छैन।
प्रकाशित १ पुस २०७५, आइतबार | 2018-12-16 19:38:26